Diyaaradda American Airlines ayaa ku dhawaaqday Duullimaadkii ugu horreeyay ee toos ah ee Duullimaadka Duulimaadyada ee Duullimaadka Dominica
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Diyaaradda American Airlines ayaa ku dhawaaqday Duullimaadkii ugu horreeyay ee toos ah ee Duullimaadka Duulimaadyada ee Duullimaadka Dominica
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dominika • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska mudane Denise Charles wuxuu cadeeyay in adeegan cusubi uu waxbadan ka badali doono warshadaha dalxiiska ee Dominica maadaama ay u oggolaanayso marin u helitaan toos ah oo toos ah dhul weynaha Mareykanka, oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee laga tago.
Adeeg cusub ayaa shaqeyn doona laba jeer usbuucii Arbacada iyo Sabtida.
Duulimaadku wuxuu ka ambabaxi doonaa Madaarka Caalamiga ah ee Miami 11-ka subaxnimo wuxuuna imaan doonaa garoonka diyaaradaha Douglas-Charles 3:21 pm.
Duulimaadyadu waxay ka tagi doonaan Dominica 4:24 pm waxayna imaan doonaan Miami 6:55 pm.
Wasaaradda Dalxiiska, Gaadiidka Caalamiga iyo Hindisaha Badda ayaa ku faraxsan inay ku dhawaaqdo xaqiijinta taas American Airlines Adeegga diyaaradaha ayaa markii ugu horreysay toos u bilaabi doona howlaha Miami (MIA) iyo Dominica (DOM) laga bilaabo Arbacada 8da Diisember 2021, 11. Adeeggu wuxuu shaqeyn doonaa laba jeer usbuucii Arbacada iyo Sabtida, isagoo ka dhoofaya Madaarka Caalamiga ah ee Miami 3 subaxnimo wuxuuna imaanayaa Douglas-Charles Airport 21:4 pm. Duulimaadka soo noqoshada wuxuu ka tagi doonaa Dominica 24:6 pm wuxuuna imaan doonaa Miami 55:XNUMX pm. Diyaaraddu waxay noqon doontaa diyaarad Embraer ah oo leh fasal ganacsi, mid dheeri ah iyo fadhiga dhaqaalaha.
Go'aankaan muhiimka ah ee ay qaadatay American Airlines wuxuu yimid kadib duulimaad guul leh oo cadeynaya kaas oo ka dhacay Dominica June 22, 2021. Wasiirka Dalxiiska mudane Denise Charles ayaa sheegtay in adeegan cusub uu wax weyn ka badali doono warshadaha dalxiiska ee Dominica maadaama ay ogolaan doonto marin ku habboon oo toos ah looga helo dhulweynaha Mareykanka, oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee laga tago. Intaas waxaa sii dheer, go'aanka ay qaadatay shirkadda duulimaadka Mareykanka ee adeegga Dominica wuxuu xaqiijinayaa soo jeedinta qiimaha ee Dominica ay u leedahay dalxiis dalxiis waxayna si weyn uga qayb qaadan doontaa sidii aan u gaari lahayn bartilmaameedkeenna oo ah 200,000 oo soo booqdayaal ah 2025. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in tani ay tahay tallaabo weyn oo wax looga qabanayo helitaanka xannibaad soo food saartay meeshii loo socday sannadihii la soo dhaafay. Helitaanka tooska ah ayaa door muhiim ah ka ciyaari doonta ballaarinta dalxiiska, horumarinta ganacsiga, gaar ahaan MSMEs, iyo fududeynta isku xirnaanta qoyska iyo ganacsiga.
Agaasimaha Dalxiiska Mr. Colin Piper wuxuu sheegay in adeegan cusub, howlwadeenada dalxiiska ee fadhigoodu yahay Mareykanka ay hadda dareemayaan kalsooni dheeraad ah inay ku darayaan Dominica wax soo saarkooda. Dominica waxay ka faa'iideysan doontaa kor u qaadista kordhinta noocyada kala duwan ee qoyska Dominica - iyo dhammaadka guryaha, iyo sidoo kale quusitaanka, socodka, fayoobaanta iyo khibradaha cunnada ee macaamiishooda. Soo-booqdayaasha ka socda Mareykanka ee xiiseynayey imaatinka Dominica waxay hadda awood u yeelan doonaan inay halkaan si aad ah uga sii fududaan laga bilaabo xilliga diyaarinta diyaaradda oo ay dhab ahaan ugu safrayaan Dominica.
American Airlines wali si siman ayey ugu faraxsan tahay duulimaadkan cusub ee tooska ah. "Waxaan ku faraxsanahay inaan sii wadno xoojinta joogitaankeena Kariibiyaanka iyadoo labo meelood oo cusub laga bilaabayo bisha Diseembar, Dominica iyo Anguilla, taasoo macaamiisheenna siineysa fursad dheeri ah oo ay ku gaaraan meelaha ay doonayaan inay u safraan," ayuu yiri Jose A. Freig, Madaxweyne Ku-Xigeenka Shirkadda Diyaaradaha Mareykanka. ee Caalamiga ah. Marka lagu daro ku darida shabakadeena, American wuxuu u adeegi doonaa 35 meelood oo ku yaal Kariibiyaanka - waa kan ugu badan ee xamuul Mareykan ah ”.
Shukulaatada Vegan cusub ee dareenka leh